HomeChampions LeagueMourinho Muxuu Dhegta Ugu Sheegay Weeraryahanadiisa Markii Ay Ku Jireen Dabaaldegga Goolkii 2aad ?
Tababaraha kooxda Chelsea ayaan isagu dabaaldeg samaynayn markii uu goolka labaad ee guusha dhaliyey Ba , wakhtigaas oo uu dhex boodayay ciyaaryahanada, isagoo qaar badan oo kamid ah dhegta u saaray hadal xan ah, kulankii Habeenimadii Arbacada ay ka adkaadeen PSG.
Mourinho ayaa sidaas laftiisu qiray oo sheegay inaanu dabaaldegayn laakiin uu weeraryahanadiisa u sheegayay talaabada taas xigta ee ay ku dhaqaaqi doonaan.
Macalinka Chelsea ayaa la arkayay isagoo ordaya si uu u gaadho ciyaaryahanadiisa oo isdul fuulay farxad darteed goolkii uu Demba Ba dhaliyey ee guusha u horseeday The Blues, si uu tallo muhiim ah oo aanu u wada sheegi karin mararka kale , markan ula tiigsado.
Mar la weydiiyey, waxaa uu qabanayay Mourinho , wuxuu ku jawaabay : ‘Maan dabaaldegaynin. ee waxaan doonayay inaan u sheego Fernando iyo Demba is bedelka ay tahay inaanu samayno, maxaa yeelay saddex daqiiqo oo lagu daraa hallisteeda ayay lahayd .’